Iibso Talooyin Bixin La'aan ah oo Taabasho La'aan ah oo Dumar Ah - Maraakiib Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Color cagaaran madow cad
cagaaran / M cagaaran / L madow / L cagaaran / S madow / S madow / M cad / L cad / S caddaan / M
Talooyin-goos-goos-goos-goos-goos-goos ah oo aan gadaal lahayn oo Dumarka - cagaar / M gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
SIZE / CM isku dhaceen dhererka
Fiiro gaar ah: Fadlan si taxadar leh u raac shaxanka qiyaasta si aad u dooratid cabbirka. Ha u dooran sida tooska ah sida caadooyinkaaga. Cabirku wuxuu yeelan karaa kala duwanaansho 1-3cm sababtoo ah cabirka gacanta. Fadlan la soco markaad cabireyso Shaygaani wuxuu leeyahay xoogaa dabacsanaan ah, waxaana jira farqi yar oo midab ah oo u dhexeeya walxaha iyo sawirada.
Tayo wanaagsan qiimaha oo runtii qurux badan!
Waxay u egtahay midab madow, ma aragto dhexdeeda oo runtiina waa quruxsantahay
Waxaan imid wax ka yar laba toddobaad maalintii aan u baahnaa! Aad ayaan ugu faraxsanahay tan, tayo wanaagsan, wax fiican oo u eg sawirrada.
Shaati weyn oo umuuqda sida sawirka oo kale.